China Sandblast Glass chaplet 120 # Nlụpụta na Factory | OLAN
Kpọọ Anyị: 0086-15100663145
Okporo ụzọ na-egosi iko chaplet
Ihe mkpuchi Glass
Gbanyụọ On Glass Beads
Akara Mbadamba Igwe
Sandblasting Glass chaplet
Egweri Glass Kpụrụkpụrụ Ọlamma
High Index Glass chaplet
1.93nd iko chaplet
2.2nd iko iko
Aluminum ntekwasa Glass chaplet
Agba iko chaplet
Premix Glass chaplet BS6088A
Gbanyụọ On Glass Beads EN1423
Akwụkwọ Mbadamba Igwe Gbanwee EN1424
Idebe On Glass Beads BS6088B
1.7nd Glass Chaads for Road ...
Sandblast Glass chaplet 120 #
Glass chaads maka sandblasting nwere atụmatụ nke chemical kwụsie ike, elu n'ibu osisi ike na ekweghị ekwe. Enwere ike ịgba ha ume n'elu ihe ahụ na ikuku ikuku wee nwee ike iji ya na mpịakọta iko, roba, plastik, ebu na nkedo ma ọ bụ mpikota. Ngwongwo ndị a na-efegharị ga-enyere aka belata ịdị ọcha nke ihe ndị dị n'elu ma nwekwuo ike iyi.
Iberibe iko aja na-acha uhie uhie nwere njirimara nke isi ike, ike, na nkwụsi ike kemịkal siri ike. A na-arụpụta ha site na soda lime silica iko ma nwee ike iji ya dị ka ihe na-agbawa agbawa iji wepụ ọtụtụ ụdị adịghị mma dị elu, gụnyere nhicha metal, imecha elu ala, peening, deburring. Ọ lowers visibiliti nke ọ bụla nwere mmebi, ọkọ, obere ntụpọ mgbe ịgbado ọkụ, egweri, ma ọ bụ ntụpọ ịgbado ọkụ ma na-ewelite product cors corrosion eguzogide ma na-enyere na-amụba yi ikike.
Iberibe iko iko adabara ọ bụghị naanị maka ọgwụgwọ ikpeazụ nke ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ dịka ọgwụgwọ tupu usoro kemịkalụ oge (electroforming, anodic oxidation), ọ na-eku ume ndụ ọhụụ n'ime ihe ndị okenye, ma ọ bụ akụkụ moto, nka na ihe eji achọ mma ma ọ bụ ime ngwa.
Mgbu ọkụ na Glass Beads n'okpuru nrụgide ga-ejigide ngwaahịa ndị ahụ na-enweghị mgbanwe akụkụ, na-enweghị mmetọ yana na-enweghị nrụbiga oke. Ọ na-arụpụta a na-agbanwe agbanwe Metallurgical dị ọcha elu imecha. Otutu ọgbụgba ọkụ Materials dị ka Aluminium oxide, ájá, Steel gbaa ga-ma na-ahapụ a Chemical Film na gbawara n'elu ma ọ bụ nwere ọnwụ ihe. Igwe bekee na-adịkarị ntakịrị ma gbaa ọkụ karịa usoro mgbasa ozi ndị ọzọ ma enwere ike iji ya na-acha ọkụ nke eriri na akụkụ siri ike ebe a chọrọ oke ike. Mgbasa ọgbụgba na Glass Beads na-akwadebe ala igwe maka ụdị mkpuchi ọ bụla na ya dị ka eserese, ịchacha enameling ma ọ bụ iko iko. Uru ndị ọzọ nke ọgbụgba ọkụ iko na-agụnye na ị nwere ike iji ha maka oge ole na ole tupu ha ehichaa elu. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka mgbasa ozi bekee na-emechi 4 - 6 cycles tupu ọ dị mkpa ka edochi ya. N'ikpeazụ, a pụrụ iji chaplet mee ihe na mmiri ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ. Nke a na-eme ka ọ vasatail na nwere ike inyere na-enye a gbawara ihicha media na-eme gị gbawara kabinet-akwụ ụgwọ ala.
A na-eji iko eji eme ihe dị ka ihe ọkụkụ na njirimara nke ịdị ọcha, ike na ike. Ha dabara adaba maka ihicha na ihicha nsị na nsị dị iche iche ka e nwee ike iji hazie ọrụ ha. Ọdịdị kemịkal nke iko iko ahụ anaghị arụ ọrụ ma ọ na-adịghị egbu egbu, n'oge eji ya, ọ nweghị iron ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ na-adị n'elu ebe a na-arụ ọrụ, ọ gaghịkwa emetụta gburugburu. Okirikiri nke ire ụtọ na-eme ka ọ ghara ibibi njin nke nkenke nke arụ ọrụ n'oge usoro nke ikpo ọkụ. Otu ngwa pụrụ iche maka iko iko bekee ọgbụgba ọkụ bụ peening, nke na-enyere metal mma iguzogide ike ọgwụgwụ na cracking si nchegbu corrosion. Otu nnyocha chọpụtara na ọ nwere ike ime ka ike gwụ elu site na ihe dịka 17.14%. Ọ na-enye gị satin mara mma na-emecha ka ọ na-abawanye ogologo oge nke ngwaahịa a.
Main ngwaahịa nkọwapụta maka sandblasting dị ka ndị na-esonụ table:
Mbanụ. Dayameta (um) Ekekọtara ọnụ sieve size
Nwere ike ịhọrọ oke iko iko dị iche n’etiti 45um-850um dịka ọrụ dị iche iche.
High Ike Glass chaplet (maka ọgbụgba ọkụ)
Na abịakọrọ ikuku dị ka anwansị ike, ngwaahịa a na-mere site sprinkling chaplet n'okpuru nnukwu ọsọ na mgbali n'elu workpiece maka peening na polishing.
Ebumnuche ndị ọzọ nke ngwaahịa ndị a:
1. Clear iche iche Ebu nke mmetụta ibe ya bụrụ, ibe ya bụrụ, iko, roba na plastic, metal nkedo na extrusion.
2. Kwụsị nchegbu mgbatị, mụbaa ndụ ike ọgwụgwụ ma bulie nrụgide nrụrụ corrosion. Dịka ọmụmaatụ, turbo engine ụgbọ elu, vane, shaft, undercarriage, mmiri dị iche iche na gia, wdg.
3. Hichaa ma wepu slitter onu na burr na circuit efere na plastic-kaa akara geminate transistors tupu stannum soldering
4. Wepu ị ga na piston na cylinder ma nye elu na-enwu gbaa na ọkara-enweghị ezi maka ọgwụ na ahụ ike na akụkụ ụgbọala.
5. Electromotor doro anya na akụkụ ndị dị ka akaghị, brush eletrik na rotor nke n'oge nrụzi dị arọ
6. Hichaa ma wepu burr nke metal tube na kpomkwem-gbazee na-abụghị ferrous metal tube. A ga-eji maka peening aggrandizement na polishing nke akwa igwe akụkụ.
High Ike Glass chaplet maka ọgbụgba ọkụ
.Dị Ntupu Mkpụrụ ọka μ m
30 # 1 20-40 850-425
40 # 40 30-40 Ogbe 600-425
60 # 60 40-60 425-300
80 # # 60-100 300-150
100 # # 70-140 212-106
120 # # 100-140 150-106
180 # # 140-200 106-75
280 # # 200-325 75-45
Dị ka ndị ahịa chọrọ.
Nke gara aga: Sandblast Glass chaplet 150 #
Osote: Sandblast Glass chaplet 100 #
Glass chaplet N'ihi abrasive sandblasting
Glass chaplet N'ihi Sandblasting
Glass chaads N'ihi Sandblasting Nzube
Glass chaplet Sandblasting
Glass chaplet Sandblasting Ihe
Glass chaplet Sandblasting Suppliers
Glass Kpụrụkpụrụ Ọlamma Ji Na Sandblasting Machine
Glass Microspheres N'ihi Sandblasting
Ekweghị ekwe 6-7 Mohs Sandblasting Glass Ikwupụta
Sandblast Glass chaplet
Sandblasting chaplet Factory Na China
Sandblast Glass chaplet 180 #
Sandblast Glass Kpụrụkpụrụ Ọlamma 60 #
Aluminum ntekwasa Glass chaplet (1.93nd)
Egweri Glass Kpụrụkpụrụ Ọlamma 4.0-5.0mm
Egweri Glass Kpụrụkpụrụ Ọlamma 0.8-1.0mm
Agba Glass Kpụrụkpụrụ Ọlamma 6-9mm
Dec-28-2020 GLASS BEADS ABNT NBR 6831: 2001 CANCELADA （Sinal ...
Nọvemba-23-2020 Kù nke China Homelife India 2018
Nọvemba-23-2020 Kù nke China Homelife Dubai 2018
Nọvemba-23-2020 Ihe ncheta ihe egwu di egwu L / C: Ndi oru ugbo ndi oru ugbo ...
Nọvemba-23-2020 Kù nke Tratraffic China Shanghai 2019
Nọvemba-23-2020 Nke isii nke China-Russia Expo, Harbin, China
Copyright - 2019-2020: LANGFANG OLAN GlasAS BeadsS., LTD Ikike Niile Echekwabara.